Aragtida Cilmiga.. 6-da Astaamood ee Ugu Muhiimsan ee Raggu Ay Dumarka Kusoo Jiidan Karaan – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Aragtida Cilmiga.. 6-da Astaamood ee Ugu Muhiimsan ee Raggu Ay Dumarka Kusoo...
Aragtida Cilmiga.. 6-da Astaamood ee Ugu Muhiimsan ee Raggu Ay Dumarka Kusoo Jiidan Karaan
Maxey dumarku jecel yihiin oo ay rabaan? waa su’aal rag badan mashquulisa, gaar ahaan marka ay ku fakrayaan waxey dumarka ku soo jiidan karaan oo ragga kale ay kaga dheereyn karaan.
Wibsite-ka “dmarge“, ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay halbeegga cilmiga ah ee gabar kasta lagu soo jiidan karo, kama mid ah dhiririka saa’idka ah iyo murqaha waaweyn.
Warbixintan ayaa lagu soo koobay lix qodob oo sidan kala ah:
1- Qurux aan saa’id ahayn
Inaad tahay qof murqo waaweyn ama aad u qurux badan, waxaa dhici karta in dumar badan lagu soo jiito, laakiin quruxda aan saa’idka ahayn ayaa si aad ah loogu soo jiidan karaa dumarka, sida lagu ogaaday daraasad la sameeyay oo lagu ogaaday iney dumarku inta badan raadiyaan ragga aan quruxda dheeraadka ah lahayn, maadaama ay aaminsan yihiin in ninka quruxda badan aaney aaney muddo dheer sii haysan karin.
Weydii gabar kasta waxey lamaanaheeda ku jeceshay, waxey kuu sheegaysaa inuu aad uga qosliyo, cilmiguna waxa uu arrintan ku fasirayaa in dabeecadda kaftanka uu ka dhigayo iney u muuqato gabar caqi badan oo la jecel yahay.
3- Hoggaansami kara
Dumarku waxey aad u jecel yihiin ragga ay si fudud hoggaankooda ku qaban karaan ee aadka ugu nugul, maxaa yeelay; arrintaasi waxey ka dhigeysaa iney aaminaan in xiriirkaasi uu muddo dheer sii jiri karo.
4- Geesi ah
Dumarku waxaa aad usoo jiita ragga geesiga ah ee aan waaban ee marnaba aan ka cararin mas’uuliyadaha horyaalla ee qalbiga libaaxa leh.
5- Ninka naf hurka yaqaanna
Daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday iney dumarku aad u jecel yihiin ragga waxwalba iyaga u hura oo naftooda ka horumariya, maadama ay aaminsan yihiin inuu leeyahay xiriir muddo dheer sii jira oo ay isku raagi karaan.
6- Midabka casaanka ah
Waxaa la wada ogyahay iney raggu aad u jecel yihiin midabka casaanka ah iney dumarka ku arkaan, dumarkuna waa la mid ah oo midabka casaanka ah waxa uu ninka ragga ah ka dhigaa qof firfircoon oo soojiidasho badan.
Previous articleYaa Ku Horreeya Garashada Tilmaanta Waddooyinka Ragga Iyo Dumarka (Daraasad)
Next articleDEG DEG: Weerarkii Muqdisho oo 22 saac kadib ugu dambeyn lasoo afjaray
Nin India u Dhashay oo Aan Tintiisa Jarin Isla Markaana Aan...